Wiil Hooyadiis ku dilay Magaalada Bergen kadibna isaga is dilay
HomeWararka Maanta SomaliskaWiil Hooyadiis ku dilay Magaalada Bergen kadibna isaga is dilay
Wararka laga helay magaalada Bergen ee Dalka Norway ayaa sheegaya in Banaanka Magaalada gaar ahaan Nawaaxiga Askøy guri ku yaala laga helay meydka hooyo 54 sano jir iyo wiil ay dhashay oo 28 sano jir kuwaasi oo markii hore Dilkooda leesku qilaafsanaa.
Booliska magaalada oo maanta shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in ay soo gabagabeeyeen wajiga hore ee baaritaanka isla markaan ay tuhunsanyihiin in wiilka uu dilay hooyadiisa ka hor inta uusan isaga is dilin.
booliska ayaa intaasi ku daray in baaritaan lagu sameenayo meydka 28 sano jirka si loo hubiyo dilka uu u geestay hooyadiis oo 54 sano jir waxana kiiska baaritaanka bilaabay dhaqaatiir loo xilsaaray.
booliska ayaa u suuri gashay in Guriga laga helay labada meyd ay kasoo qaadaan taleefano iyo compurter kuwaasi oo baritaan lagu sameenayo.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa Norway ka dhacay Falal naxdin leh kuwaasi oo ugu danbeeyay hooyo dishay labo caruur ah ay dhashay.